ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : တချို့မုန်းတတ်သည်
တချို့မုန်းတတ်သည်
ဇတ်လမ်းထဲတွင် ပါဝင်သော အချို့ဇတ်ဝင်ခန်းများသည် တကယ့် ဖြစ်ခဲ့ ပြောခဲ့ကြသော စကားများဖြစ်ပါသည် ။
ကိုစိုးလင်း သည် ကျောင်းသားတပ်မတော် ကချင်ပြည်နယ်သို့ ရောက်ရှိသွားသည် ။
ဗီလိန် ကိုထွေးတင့် သည် ကျောင်းသားတပ်မတော် ကရင်နီ သို့ ရောက်သွားခဲ့ကြသည် .
နော်သွေး သည် ယ္ခုအခါ ကျောင်းဆရာမ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည် .
အောင်ဇော်မင်း သည် ဖေ့ဘုတ်လောကတွင် ရှယ်ပါတယ် နာမည်တလုံးဖြင့် အမေရိကန်သို့ ရောက်သွားပါသည် ။ ရှယ်ပါတယ်
အောင်ဇော်မင်း သည် ဖေ့ဘုတ်လောကတွင် ရှယ်ပါတယ် နာမည်တလုံးဖြင့် အမေရိကန်သို့ ရောက်သွားပါသည် ။
Mr Htay Tintပေးပို့ ထားပါတယ်။
ကဏ္ဍ တချို့မုန်းတတ်သည်